Muxuu Yahay Xalka Sharci ee Khilaafaadka u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Dowlad Gobaleedyada? – Hornafrik Media Network
Muxuu Yahay Xalka Sharci ee Khilaafaadka u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Dowlad Gobaleedyada?
By Liibaan Nuur	 On Aug 15, 2019
Dastuurka Soomaaliya ee sida KMG loo ansixiyay 1/8/2012, wuxuu qeexayaa in Soomaaliya ay qaadatay Nidaamka Federalka Halkaasna looga guuray Nimaadkii Dowladda mideysan (Unitary State) ee Soomaaliya ku dhaqmi jirtay tan iyo markii ay qaadatay xurriyadda 1960.
Dastuurka Federaalku wuxuu Xaddidayaa Xiriirka ka dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Dowladaha Xubinta ka ah Dowladda Federaalka Ama haddii si kale loo dhaho xiriirka ka dhaxeeya Dowladda Fedaraalka iyo Dowlad Gobaleedyada, sidoo kale Dastuurku wuxuu dhigayaa mabaadi’da asaasiga ah ee nidaamka Federaalka iyo xiriirada iskaashiga Heerarka Dowladaha, Heer Federaal Iyo HeerDowlad Gobaleed.
Haddaba, Qormadaan kooban waxay ku saabsan tahay Hannanka Xallinta Khilaafaadka ka dhax dhashaHeerarka Xukuumadaha ee Dowladda Federaalka sida khilaafaadka iyo Murannada u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo dowlad Gobaleedyada ama haddii si kale aan u sheegno Heerarka Dowladeed ee kala sarreeya, iyo sidoo kale khilaafaadka ka dhax dhacaHeerarka Dowladeed ee Siman oo laga wado Khilaafaadka iyo murannada u dhaxeeya Dowlad Gobaleedyada laftooda.
Ahmiyadda joogtaynta Iskaashiga iyo Xiriirka u dhaxeeya Heerarka Dowladahau leedahay Xallinta Khilaafaadka Xukuumadaha dhaxdooda ah.
3- Hababka xallinta khilaafaadka ee Xukuumadaha dhexdooda ahoo isku jiro :
Ugu dambayntii waxaan rajaynaa in Qormadaan ay iffindoonto arrimo badan oo xirirr la lah hirgelinta Nidaamka Federalk iyo Xillinta Murannada iyo Khilaafaadka ka dhax dhaca Heerarka Dowladaha.
Dastuurrada Waddamada ku dhaqmo NidaamkaFederaalkainta badan waxay Qoraan Mabaadi’ muhiim ah oo saldhig u ah joogtaynta iskaashiga iyo xiriirka u dhaxeeya Heerarka kala duwan ee Dowladaha Heer Federaal iyo Heer Dowlad Gobaleed).
Wadamo kale oo ku dhaqmo Nidaamka Federaalka Dastuurkooda ayaa si cad u qeexaya mabaadii’da gaarka ah ee la xiriirta nidaamka iskaashiga Heerarka Dowladaha sida wadanka koonfur afrika, hase ahaatee Dastuurrada wadamadaas waxay u dhaafayaan qaab-dhismeedka hay’adaha hormarinaaya xiriirka iskaashiga xukuumadaha sharci gaar oo uu soo saaro Baarlamaanku.
Sida lagu yaqaanno waddamada Federaalka, gaar ahaan kuwa Nimaadkaan uu ku Cusubyahay sida Soomaaliya oo kale waxaa hubaal ah in ay jirayaan khilaafaad la xiriira iskaashiga iyo qaybsiga awoodaha, Sidaa awgeedna Dastuurrada Wadamada federaalku waxay dejiyaan habraacyo iyo hay’ado awood buuxda loo siiyay in ay ka gaaraan go’aan kama-dambeys ah iyo xalinta khilaafaadka ka dhasha Heerarka kala duwan ee ee Dowladaha Haddii ay ahaa lahaayeen kuwa Siman ama kuwa aan sinnayn.
Haddaba waxaa jira laba hab oo loo raaco Xallinta Khilaafaadka iyo Murannada u dhexeeya Heerarka Xukuumadaha, HeerFederaal iyo HeerDowlad Gobaleedka iyo Dowlad Gobaleedyad dhexdooda, labadaas hab oo kala ah hab aan garsoor ahayn iyo habka garsoorka.
Waddamada qaarkood ayaa doortay in lagu xalliyo khilaafaadka hab aan garsoorka ahayn. Dalka Itoobiya, awoodda lagu farsirayo Dastuurka laguna xallinaayo khilaafaadka xukuumadaha dhexdooda waxaa leh Golaha Federaalka, oo ka kooban wakiillo ka socda kooxo ka soo jeedo qowmiyadaha kala duwan ee Dalkaas. Maxkamadaha caadiga ah ma laha awoodda ka garnaqista murannada la xiriira Dastuurinimada sharciyada oo dhan, ha ahaado Heer federaal ama Heer dowlad Gobaleed.
Madaxwaynaha Jamhuuriyaddu iyo Aqalka Sare ee Barlamaanka Madaxwaynaha Jamhuuriyaddu Maadaama uu yahayMadaxa Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya;, astaanta Midnimada qaranka, Ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi’da asaasiga ah ee Dastuurka, sida uu qeexaayo qodobka 87aad ee Dastuurka FKMG, wuxuu hurmuud ka noqo karaa Xallinta Khilaafaadka Heerarka Xukumadaha Dhexdooda ah, si taa lamid ah ayaa aqalka sare ee barlamaanka isna uu kaalin wayn uga qaada karaa Xallinta Khilaafaadka Heerarka Xukumadaha Dhexdooda ah maadaama Xubin kasta oo ka mid ah Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka uu xil gaar ahi ka saaran yahay matalaadda danaha Dawladaha xubinta ka ah DawladdaFederaalka ee uu matalayo iyo in uu ilaaliyo nidaamka Federaalka, kuna shaqeeyo dareen iskaashi Federaalnimo. 
Wadamo badan oo ku dhaqmo Nidaamka Federaalka Maxkamadda ugu sarraysa ee Federaalka ayaa Xalka ugu Dambeeya ka gaarta khilaafaadka xukuumadaha dhaxdooda ka dhasha. Dalka Koofur Afrika, Maxkamadda Dastuuriga ah waxay leedahay awoodda ugu dambaysa ee xallinta khilaafaadka u dhaxeeya Dawladda dhexe iyo Gobollada iyo sidoo kale midka ka dhax dhasha gobollada dhaxdooda. Dastuurku wuxuuu dalbaayaa in dhinacyada khilaafku u dhaxeeyo ay marka hore sameeyaan dadaal maangal ah si loo xalliyo khilaafaadka si wadaxaajood ah. Maqnaanshaha dadaalka lagu xalliyo khilaafka iyo niyadsami-, Maxkamadda waxay dib ugu soo celin kartaa dhinacyada uu khilaafaadku ka dhaxeeya si ay marka hore khilaafooda ku Xalliyaan wada xaajood.. Dastuurrada dalaka Nigeria iyo Argentina ayaa sidoo kale ayina awood u siinayaan maxkamadda sare ee Federaalka in ay xaliso khilaafaadka ka dhax dhasho xukuumadaha ha noqdaan kuwa Siman ama kuwa kala sarreya.
Iyadoo laga Ambaqaadaayo Ahmiyadda ay leedahay maxkamadaha Federaalka ugu sarreeeya ee Dhinaca xallinta khilaafaadka xukuumadaha dhaxdooda ha loogu yeero Maxkamadda Dastuuriga ahama Maxkamadda Sare, ayaa Dowladuhu si wanaagsan uga fikiraan habka lagu magacaabayo xubnaha Maxkamaddaas tusaale ahaan, dalka Jarmalka, aqlka koowaad iyo labaad mid kasta wuxuu magacaabayaa kala bar xubnaha ka tirsan Maxkamadda Dastuuriga ah. Koofur Afrika aqalk labaad kuma lug laha soo-magacaabist xubnaha Maxkamadda Dastuuriga ah oo Garsoorayaasha Maxkamadda Dastuurka waxaa soo magacaabaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo la tashanaya Golaha Adeega Garsoorka iyo xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka ah. Dalka Maraykanka, Madaxweynaha ayaa soo magacaaba garsoorayaasha kaddibna waxaa ansixiya aqalka sare, aqalka hoose kuma lug laha soo-magacaabista garsoorayaasha.
Dastuurka Federaalka ee Sida ku kumeel gaarka ah loo ansixiyay ee Soomaaliya wuxuu ka dalbayaa Heerarka kala duwan ee dawladaha in ay isku dayaanmarka Hore in lagu xalliyo khilaafaadka si wada-hadal iyo dib u heshiisiin ah (Qodobka 50(g)). Haddii uu guul dareeysto wadahadalka, awoodda kama-dambaysta ee xallinta khilaafaadka xukuumadaha dhexdooda ah waxaa Dastuurku siiyay Maxkamadda Dastuuriga (109C Qodobka(1)(d)). Dastuurku si gaar ah uma dalbaayo in ay Maxkamaddu hubiso in dhinacyada is-khilaafsan ama muranku ka dhaxeeyo ay billaabaan wada-hadal iyo dib-u heshiisiin ka-hor inta aysan u gudbin Dacwad Maxkamadda Dastuuriga ah iyo in khilaafaadka iyo Murannada la isku dayo in lagu Xalliyo Wada Xaajood, Hase ahaatee , mabaadi’da Federaalka ee Dastuurka Lagu Xusay ayaa qeexaysa (Qodobada 51 iyo 52) in loo baahan yahay dadaallo iyo wada xaajood u dhaxeeya Dhinacyada .
Ugu dambeyntii si loo Daboolo Dul duleelada muuqda, Xal kama dambeys ahna looga Gaaro Murannada Ka dhax dhasha Xukuumadaha, Daraasadaan Gaaban waxay soo jeedinee Arrimahaan soo socda:
Xog: Xagee loogu geeyaa Alshabaab Lacagaha ay ka qaadaan Dekadda,? Akhriso Faahfaahin